Sawirro: Hormuud oo Deeqo isugu jira Raashin Dhar & Lacag gaarsiisay Maxaabiista Xabsiga Dhaxe .
Thursday May 09, 2019 - 10:44:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hey'adda Hoormuud Foundation ayaa sidoo kale Deeq isugu jirta Lacag Dollar ah iyo Timir waxay ay Maanta gaarsiisey Ciidamada Naafada Xoogga Dalka ee ku jira Isbitaalka Martiini ee Magaalada Muqdisho. Labada dhacdo ayaa kusoo beegmay iyadoo lagu
Hey'adda Hoormuud Foundation ayaa sidoo kale Deeq isugu jirta Lacag Dollar ah iyo Timir waxay ay Maanta gaarsiisey Ciidamada Naafada Xoogga Dalka ee ku jira Isbitaalka Martiini ee Magaalada Muqdisho. Labada dhacdo ayaa kusoo beegmay iyadoo lagu jiro asbuucii koowaad ee bisha Ramadaan, oo ay caadiyan baahiyuhu bataan.
Cabdulaahi Nuur Cusmaan, madaxa Hormuud Telecom Foundation oo sidoo kale saxafiyiinta kula hadlay Isbitaalka Martiini ayaa sheegay iney lacag dollar ah ku wareejiyeen naafada si ay wax ugu badsadaan inta lagu jiro bisha Ramadan, wuxuu kaloo sheegay in ay timir gaarsiin doonaan labo cisho gudahood. Madaxa ciidanka naafada ee isbitaalka Martiini ayaa hormuud uga mahadceliyay dadaalkeeda wanaagsan.
Hormuud Foundation oo qeyb ka ah shirkadda Isgaarsiinta ee ugu balaaran Soomaaliya ee Hormuud Telecom ayaa inta badan xiliyaadaan oo kale looga bartay iney caawiso dadka nugul sida naafada, maxaabiista iyo agoonta.
Hey’adda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta deeq isugu jirta Raashin, Dhar & 5 neef oo geel ah ku wareejisay Mas’uuliyiinta Xabsiga dhexe ee Xamar, taas oo loogu talo galay afurinta & Ciidsiinta Maxaabiista xiran Xabsigaasi.
Guddoomiyaha Hey’adda Hormuud Telecom Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo faah faahin ka bixiyey wax ay ka koobantahay deeqdani, ayaa sheegay in uu ka kooban yahay Boqol loor oo Bur ah, Boqol Loor oo Bariis ah, Boqol loor oo Sokor ah, Kun Litter oo Saliid ah, Shan Jawaan oo Caleen ah, Toban Kartoon oo Cabitaan ah, Afar kun oo kiilo oo Timir ah, Shan Neef oo Geela nuuca birimada ah & Dharkoodii ciidda oo isugu jira Rag & Dumar intaba.